केटीहरु एक्लै हुँदा यस्तो गर्छन् - Nepali Virals
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १३:०७	7,235 पटक-पढिएको
कोमलताका प्रतिक अनि प्रेमका सारथी हुन् महिला । त्यसो त केटी/युवती/महिला/गर्लफ्रेन्ड/प्रेमिका इत्यादि भन्ने बितिक्कै पुरुषहरुको मन एकत्रित भैहाल्छ । ‘महिला’ नाममै एउटा यस्तो अचुक गुण छ जुन पुरषसंग कदापी हुन् सक्दैन । र त महिला भन्ने बितिक्कै जस्तोसुकै पुरुष पनि मरिहत्ते गर्छन र महिलाका पछि लाग्छन । अझ मन परेकी युवती पाएनन् भने कतिपयले ज्यान नै फालिदिन्छन । महिलाको एक बोलीले पनि पुरुषको दिमाग छताछुल्ल बनाई दिन्छ ।
जस्तोसुकै कठोर मनलाई पनि पगाली दिन्छ, जतिसुकै पीडादायी क्षणमा पनि सुखानुभूति गराई दिन्छ । पुरुषहरु महिला भन्ने बितिक्कै निकै चियो चासो गर्छन । अनि सोच्छन ‘केटीहरु एक्लै हुँदा के के गर्दो रहेछ ?’ यो धेरैको मनमा लाग्ने जिज्ञासा हो । आज हामी तपाईको यही जिज्ञासा मेटाउने कोसिसमा छौ ।
बिनाकपडा बस्न रुचाउनु
एक्लै हुँदा केटीहरु बिना कपडा बस्न रुचाउछन् । यसबाट उनीहरुलाई आनन्द र स्वतन्त्र अनुभूति हुने बिभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।
गर्भवती जस्तो गर्नु
पेटमा कुनै बस्तु राखेर गर्भवती भएको नाटक गरेर हेर्न केटिहरुलाई निकै मन पर्छ । अलि बुझ्ने भएदेखि नै युवतीहरुलाई गर्भवती हुँदा आफु कस्तो देखिएला र कसरी सामना गर्ने होला ? भन्ने उत्सुकता र जिज्ञासा पैसा हुन्छ तसर्थ उनीहरु एक्लै हुँदा यसरी हेर्छन ।
निस्फिक्रीसाथ् ग्याँस छोड्नु
केटीहरुको अर्को अचम्म बानी हो निस्फिक्रीसाथ् ग्याँस छोड्नु । केताहरुका तुलनामा केटीहरु बढी लजाउछन तसर्थ पनि उनीहरु एक्लै हुँदा यसको फाइदा उठाउछन ।
केटाहरु मात्रै होइन केटीहरु पनि पुर्ण मुभी हेर्नमा माहिर छन् । बिभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार केटीहरु एक्लै हुँदा पोर्न मोभी हेर्ने मौका छोपि हाल्छन । केटाहरुलाई भन्दा केटीलाई बढी मात्रामा यौन जिज्ञासा हुने गर्छन ।
त्यस्तै केटीहरु आफ्नो यौनांग देखेर आफै दंग पर्छन । त्यसो त उनीहरु स्तनसंग खेल्ने र दुध खाएर हेर्ने गरेको सर्वेक्षणहरुले देखाएको छ ।
केटा होस् अथवा केटी नै किन नहोस एक्लै हुँदा मौका छोपी हाल्ने अर्को काम हो मैथुन । आत्मसन्तुष्टि र यौन तृष्णा मेट्ने उत्तम बिकल्पका रुपमा लिइने मैथुन गर्न केटीहरु पनि उतिक्कै माहिर हुन्छन । बिशेषत: अबिबाहिर केटीहरु एक्लो हुने बितिक्कै मैथुनमा रमाउने गर्छन ।
अघिल्लो महोत्सव हेरेर रमाउन आएका आमाहरु धरधरी रोएपछि….
पछिल्लो ओस्कार बिजेता लियोनार्दोको भाषण एकाएक भाइरल (फिल्मको ट्रेलरसहित)